Alia al-Hathloul: Qahtani wuxuu ka qeybgalay marar badan jirdilka loo geysanayey walaashey… – Hagaag.com
Posted on 13 Janaayo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Walaasha Loujain al-Hathloul ayaa u sheegtay The New York Times: “Qahtani wuxuu ka qeybgalay marar badan jirdilka loo geysanayey walaashey asaga oo weliba qoslayey.
Alia Hathloul, oo ku nool dalka Belgium oo ah walaasha Loujain al-Hathloul, ayaa ku qortay maqaal wargeyska The New York Times ee ka soo baxa Maraykanka, waxay is weydiisay in Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu kala hadli doono mas’uuliyiinta Sacuudiga masiirka u dhaqdhaqaaqayaasha Sacuudiga ee ku jira xabsiyada Boqortooyada xilliga uu booqanayo Riyadh.
Waxay ku sheegtay maqaalkeeda: ” in ay Arrintu tahay mid shakhsi ah sababtoo ah mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa ee xabsiga ku jira waa walaasheed Loujain, taasi oo xil weyn iska saartay sidii haweenka Sacuudiga ay u heli lahaayeen xaqa lagu wado baaburta”.
Waxay ku dartay: “Markii la xiray walaashay bishii May ee la soo dhaafay waxaan ka argagaxay iyada oo markaasi dhoweyd in dumarka laga qaado xanibaadii gaari wadida, laakin waxaan arkay warbaahinta Sacuudiga oo ku eedeynaya iyada iyo shan kale khiyaano qaran, wargeys taabacsan dowlada ayaa saadaaliyey in ay muteysan karaan xukun 20 sano xabsi ah ugu yaraan, sidoo kale waxaa laga yaabaa in uu soo baxo xukun lagu dili karo”.
Waxay raacsiisay maqaalkeeda: ” bishii November ee la soo dhaafay waxaan la hadlay dhowr wargeys iyo hey’adaha xuquuqda insaanka oo u sheegay siyaasiyiinta xiran iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda biniaadamka ee Sacuudiga la jirdilay haday yihiin rag ama haween, waxay tilmaantay wararka qaar in ay sheegeen in uu jiro xadgudub galmo”.
Waxay tidhi: “Markii waalidkeyga Loujain ku booqday xabsiga bishii December waxay u sheegtay in lagu xiray qol keligeed ah loona diiday wax booqasho ah inta u dhaxeysay bishii May ilaa August, waxay sheegtay in la garaacay, lagu dhejiyey koronto, biyo lagu ceejiyey, iyo isku day xadgudub galmo, waxaana loogu hanjabay in la kufsan doono oo la dili doono, waalidkey ayaa arkay dhaawaca jirkeeda ku yaalay. La taliyaha qasriga Saud al-Qahtani ayaa si joogta ah u joogay waqtiga la cadaabayo asaga oo weliba qoslaya, wuxuu ugu hanjabay kufsi iyo dil kadibna jirkeeda lagu tuurayo bulaacadaha”.
Alia ayaa sheegtay “in ay markii hore ka warwareeganeysay in aan wax ka qoro arrintani cabsi aan qabay awgeed, laakin waxan ka quustay in la soo daayo iyo in laga qaado xayiraada safarka ee la saaray aabahay”.